Isu Maitiro Ekufamba Isu Kufambisa WordPress Kuisirwa | Martech Zone
Unoda kufunga kuti kufambisa rako reWordPress saiti kubva kune imwe inomutora kuenda kune imwe kuri nyore, asi zvinogona kunyatso kuodza moyo. Isu tanga tichinyatso kubatsira mutengi nezuro husiku iyo yakafunga kutama kubva kune imwe inomiririra kuenda kune imwe uye yakakurumidza kuita musangano wekutambudza. Ivo vakaita izvo zvaiwanzoitwa nevanhu - ivo vakavhara iyo yese kuisirwa, vakaburitsa dhatabhesi, vakaiendesa kune nyowani server uye vakaunza iyo dhatabhesi. Uye zvakazoitika… isina peji peji.
Dambudziko nderekuti ese mauto haana kugadzirwa zvakaenzana. Mazhinji ane akasiyana mavhezheni eApache nema module akasiyana anomhanya. Vamwe vane chaiyo inonakidza mvumo nyaya dzinokonzeresa nekuisa mafaira, zvichivaita kuverenga-chete, uye zvichikonzera mifananidzo yekuisa nyaya. Vamwe vane dzakasiyana shanduro dzePHP neMySQL - dambudziko rinotyisa muindastiri yekugamuchira. Mimwe backups inosanganisira yakavanzika mafaera ayo anokanganisa mumwe akasiyana host nekuda kweyekutengesa caching uye redirection pane maseva.
Uye zvechokwadi, izvi hazvitombo sanganisira faira kurodha zvisingakwanisike. Ndiwo chaiwo mabudiro ekutanga kana iwe uine chakakomba WordPress kuisirwa… iyo dhatabhesi faira iri rakanyanya kukura kuti uise nekuisa kunze kuburikidza neMySQL admin.
Kune mamwe maturu makuru kunze uko ekubatsira, senge CMS kuCMS. Iwe unogona zvakare kushandisa yeAutoattic yega VaultPress service - ingo chengetedza saiti, isa WordPress nyowani pane iyo nyowani inomiririra, dzorera VaultPress, uye dzosa saiti. Ava vanhu vaita basa rakanaka pakushandira kwakatenderedza akawanda ezenyaya iwe aunomhanya mauri paunoyedza kufambisa webhusaiti.
Nekudaro, isu tinowanzo enda toga pazvinhu izvi uye, zvinorwadza, kazhinji kuzviita isu pachedu. Ini ndinoda iyo nyowani yekumisikidza chinhu kana uchinge waenda kune itsva inomiririra pane kudhonza chero matambudziko nesu. Saka heano matanho atinoshandisa:
We chengetedza iyo yose yekuisa uye saiti uye kurodha pasi munharaunda kuti uchengetedze zvakachengeteka.
We tumira kunze database (isingawanzo kuverengerwa nema backups) uye dhawunirodha munharaunda kuti uchengetedze zvakachengeteka.
We gadza WordPress nyowani pane server nyowani uye uwane iyo nekumhanya.
We wedzera plugins imwe panguva kuona kuti ese anowirirana uye anoshanda. Vamwe vanogadzira mapulagi vakaita basa rakanaka mukusanganisira iwo marongero mune chishandiso chekutumira kana kupa yavo vega marongero ekunze nekutumira.
We tumira zvirimo kubva kune saiti iripo uchishandisa iyo WordPress Export chishandiso chakavakirwa muWordPress chaipo.
We kupinza izvo zvirimo kune iyo saiti nyowani uchishandisa iyo WordPress Kunze chishandiso chakavakirwa mukati chaicho WordPress. Izvi zvinoda kuti iwe uwedzere ivo vashandisi… zvishoma zvinonetsa asi zvakakoshera kuedza.
We FTP iyo wp-zvemukati / yekuodha maforodha uko edu ese akarodha faira mafaera ari kuseva nyowani, kuona kuti mvumo yefaira yakaiswa mushe.
Isu takaisa iyo permalinks marongero.
We zip kumusoro dingindira uye riise uchishandisa iyo WordPress theme installer.
Isu tinoisa dingindira kurarama uye kuvaka zvakare mamamenyu.
We dzorerazve iwo majeti uye teedzera / unama zvirimo sezvazvinodiwa kubva kune dzekare kusvika kune nyowani server.
We kukamba saiti kutarisa chero nyaya nemafaira aripo.
We nemaoko ongorora iwo ese mapeji yeiyo saiti kuve nechokwadi chese chiri kutaridzika zvakanaka.
Kana zvese zvichitaridzika zvakanaka, isu ticha gadziridza yedu DNS marongero kunongedzera kumubati mutsva uye enda unorarama.
Tichava nechokwadi chekuti iyo Block Kutsvaga marongero muZvirongwa zvekuverenga zvakaremara.
Tinowedzera chero CDN kana caching nzira dzakabvumidzwa pane inomiririra mutsva kuti saiti ikurumidze. Dzimwe nguva iyi iplagi, dzimwe nguva chikamu chemidziyo yevaenzi.
Tichadaro dzokorora saiti neWebmasters 'Zvishandiso kuona kana paine matambudziko arikuonekwa neGoogle.
Isu tichachengeta iyo yakare inomiririra yakatenderedza kwevhiki kana kudaro… kungangoitika kana paine imwe nenjodzi nyaya. Mushure mevhiki kana kuti yekumhanya zvakanaka, tinodzivisa iyo yekare inomiririra uye nekuvhara account.
Tags: backup wordpresscms kusvika cmsmaitiro ekufambisa wordpressfambisa WordPressfambisa webhusaitifambisa wordpressdzorerazve wordpressdzosera wordpressvaultpresswordpress backupWordPress kudzorerazip izwi